मेथडको लेवी कार्सनले आरएसपी शिक्षामा कसरी एक VFX कलाकारको रूपमा सफल हुन सिक्यो NAB देखाउनुहोस् समाचार | २०२० एनएबी शो मिडिया पार्टनर र एनएबी शो लाइभको निर्माता। प्रसारण ईन्जिनियरिंग समाचार
घर » समाचार » मेथडको लेवी कार्सनले आरएसपी शिक्षामा कसरी एक VFX कलाकारको रूपमा सफल हुन सिक्यो
Lewie Carson (बाँया) सँगै आरएसपी शिक्षा स्नातक क्रिस ला संग।
मेथडको लेवी कार्सनले आरएसपी शिक्षामा कसरी एक VFX कलाकारको रूपमा सफल हुन सिक्यो
"म यो माया गर्दैछु!"
एडिलेड, दक्षिण अष्ट्रेलिया - लेवी कार्सन मेलबोर्नको मेथोडमा जूनियर कम्पोजिटर हुन्, जहाँ उनले धेरै स्टुडियो फिल्महरूमा काम गरिसकेका छन्। ब्ल्याकमा पुरुष: अन्तर्राष्ट्रिय, जोन विक: अध्याय3- प्याराबेलम, चिहान RAIDER, क्रिस्टोफर रोबिन, Aquaman र AXL। मूल रूपमा मेलबोर्नबाट, लेवीले राइजिंग सन पिक्चर्सको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम 2016 मा कम्पोजिटिंग र ट्र्याकिंगमा पूरा गरे। आरएसपीमा उनले रोटो / पेन्ट वर्क र कम्पोजि forका लागि उद्योग मानक अभ्यासहरू सिक्यो, उही सीपहरू जुन उसले आज काममा प्रयोग गर्दछ।
लुई कार्सनले भर्खरै आरएसपीसँग आफ्नो प्रशिक्षण, काम र भविष्यको लागि योजनाको बारेमा कुरा गरे।
आरएसएसपी: तपाईं दृश्य प्रभावहरूमा कहिले रुचि राख्नुभयो?
लुई कार्सन: मैले सँधै टिभी कार्यक्रमहरू, चलचित्रहरू, एनिमेसन, ती सबै मनपराएको छु। मलाई धेरै युवावस्थादेखि नै मन पर्यो। तर मैले कल्पना पनि गरिनँ कि दृश्य दृश्यमा मेरो क्यारियर हुनेछ।
LC: यो एक अमेरिकी चीज जस्तो देखिन्थ्यो। अष्ट्रेलियामा किन कसैले त्यस्तो गर्छ? तर त्यसोभए उनीहरूले फिलिम खिचे मैट्रिक्स सिड्नीमा। यसले मलाई सोच्न लगायो कि हुन सक्छ मेरो लागि त्यहाँ सम्भावना छ। म त्यतिबेला कान्छी थिएँ, तर यो मेरो दिमागमा अड्कियो।
आरएसएसपी: तपाईंले मेलबोर्नमा RMIT बाट आफ्नो स्नातक डिग्री प्राप्त गर्नुभयो?
LC: त्यो सहि छ। मसँग स्क्रीन र मिडियामा उन्नत डिग्री छ।
आरएसएसपी: RSP को स्नातक प्रमाणपत्र कार्यक्रममा तपाइँलाई त्यहाँ जानको कारण के भयो?
LC: यो छोटो र गहन थियो। यसको मतलब स्टुडियोमा काम गर्नु र उद्योगबाट आएका मानिसबाट सिक्नु, कलाकारहरू चलचित्रहरूमा काम गर्नु हो। यो वास्तविक स्टूडियोको ईन्स र आउटहरू हेर्नको लागि मौका थियो। यसको लागि स्वाद लिनुहोस्। यो मोहित लाग्यो र मलाई यो मन पर्यो।
आरएसएसपी: तपाईंले कम्पोजि and र ट्र्याकिंग प्रोग्राम किन चयन गर्नुभयो?
LC: यो राम्रो मार्ग देखिन्थ्यो। म धेरै जसो विद्यार्थीहरू भन्दा अलि उमेरको थिएँ — म 25 — र म पहिले कम्पोजि inमा डबल थिएँ। मैले यसमा आफूलाई समर्पण गरेको थिएन, तर यो मैले आनन्द पाएको कुरा हो।
आरएसएसपी: पाठ्यक्रमले नुके मार्फत कम्पोजि teac गर्न सिकाउँछ, के तपाईलाई नयाँ थियो?
LC: हो। मैले यसका बारे सुनेको थिए तर कहिले पनि खोलेको छैन।
आरएसएसपी: के यो सुरू गर्न गाह्रो थियो?
LC: सुरुमा, तर मेरो प्रशिक्षक यो धेरै डरलाग्दो छैन बनाउन मा धेरै राम्रो थियो र म यसलाई चाँडै सहज भए। मैले चाँडै नै आधारभूत कुराहरू सिके, तपाईले नयाँ शट पाउँदा के गर्ने, कसरी यसको पहुँच गर्ने, कसरी आफ्नो आवश्यकताहरूको आकलन गर्ने भन्ने बारे। ती सीपहरू हुन् जुन तपाईं परम्परागत विश्वविद्यालयको सेटि getमा पाउनुहुन्न जहाँ तपाईं कक्षाबाट अर्को कक्षामा जाँदै हुनुहुन्छ बरु एक प्रोग्रामको साथ छ वा आठ घण्टा काम गर्नु भन्दा।
आरएसएसपी: तपाईंको कक्षामा कति जना विद्यार्थी थिए?
LC: हामीमध्ये आठ जना थियौं।
आरएसएसपी: तपाईंले आफ्नो प्रशिक्षकहरूको समर्थनमा धेरै हातहरू प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ?
LC: हो मैले गरे। त्यो धेरै राम्रो थियो। तिनीहरूले तपाईलाई धेरै कुरा सिकाउँछन् र सल्लाह साझेदारी गर्छन् जुन तपाईं कहिँ पनि पाउन सक्नुहुन्न। साथै, तपाइँ जान्नुहोस् कि कसरी अन्य विभागहरू काम गर्दछन्, कसरी उनीहरू स्टूडियो पाइपलाइन फिट गर्छन्। उनीहरूलाई सबै सुझावहरू र युक्तिहरू थाहा थियो, ठीक के गर्नु पर्छ र कसरी बुझाउनु पर्छ। यदि मैले काम थाल्दा मलाई त्यो ज्ञान नभएको भए, म हेडलाइटमा हिरणजस्तो हुने थिएँ।
आरएसएसपी: त्यसोभए, आरएसपीमा तपाईंको प्रशिक्षणले तपाईंलाई उद्योगमा कामको लागि तयार बनायो?
LC: यो उत्तम थियो। जब मैले मेथडमा काम गर्न सुरु गरें, त्यहाँ कुनै ठूलो वक्र थिएन। म यसमा सिधा गएँ र मलाई थाहा थियो कि म के गर्दैछु र उनीहरूले मबाट के आशा राखेका थिए।
आरएसएसपी: के त्यो पहिलो काम पाउन गाह्रो थियो?
LC: यसले केहि समय लिए। मैले धेरै कार्यक्रम र पुन: सुरुहरू पठाएको थिएँ, र मैले मानिसहरूलाई प्रत्येक महिना पेस्टर गर्दछु। यो निराशाजनक हुन सक्छ जब तपाइँ प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुहुन्न, तर तपाइँ निरन्तर लागिरहनु पर्छ।
आरएसएसपी: तपाईं विधिमा कस्तो प्रकारको काम गर्दै हुनुहुन्छ?
LC: रोटो र सफा गर्नुहोस्।
आरएसएसपी: के तपाईंले आरएसपीमा अध्ययन गरेको जस्तो मिल्छ?
LC: मैले अध्ययन गरेको कुरा पनि त्यस्तै हो।
आरएसएसपी: कस्तो भइरहेको छ?
LC: एकदमै राम्रो। म यो माया गर्छु म अरु केहि चाहन्न। म ठूलो बजेट फिल्महरूमा काम गर्दैछु, त्यस्तो चीजहरू जुन म जवान थिएँ भनेर सपना देख्थें। यो रमाईलो काम र एक उत्तम वातावरण हो। म वास्तवमै यसको मोल गर्छु।
आरएसएसपी: तपाईं कहाँबाट जान्नुहुन्छ?
LC: मलाई केही बेर क्यानाडा, अमेरिका वा लन्डनमा पनि काम गर्न मनपर्छ। तब, म मेरो क्यारियर ले मलाई लिन्छु।
आरएसएसपी: तपाईं आफ्नो भविष्यमा विश्वस्त महसुस गर्नुहुन्छ?
LC: निश्चित रूपमा। चलचित्र र टिभी कार्यक्रमहरूले अधिक र अधिक दृश्य प्रभावहरू लिन गइरहेका छन्। यो बढ्दो बजार हो।
आरएसएसपी: दृश्य प्रभावहरु मा एक क्यारियर को सोच एक युवा व्यक्ति को लागी तपाइँ संग के सल्लाह छ?
LC: यसलाई टाँसिनुहोस्। संसारभरि स्टुडियोहरूको बारेमा फेला पार्नुहोस्। मैले केवल अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डमा हेरे, तर तपाईं कहिँ पनि काम गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं कामको रूपमा यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने, अवसर तपाईंको हातमा छ। अर्को कुरा म यो कामको बारेमा भन्न चाहेको हुँ यो धेरै रमाईलो छ! मानिस जसले दृश्य प्रभावमा काम गर्दछन् उनीहरू यो गर्छन् किनकि उनीहरूलाई यो मनपर्दछ र किनभने तिनीहरूले चलचित्रहरूको आनन्द लिन्छन्। यस उद्योगमा कसैलाई पनि तानिएको छैन। जो कोही यहाँ छन् यहाँ छ किनकि उनीहरूले यो छनौट गरे। सबैले राम्रो समय बिताइरहेका छन्।
आरएसएसपी: त्यसोभए, आरएसपीमा प्रशिक्षण एक राम्रो निर्णय भयो।
LC: हो। 100 प्रतिशत
राइजिंग सन पिक्चर्स (आरएसपी) मा हामी विश्वव्यापी प्रमुख स्टुडियोहरूको लागि प्रेरणादायक दृश्य प्रभावहरू सिर्जना गर्दछौं। हाम्रो स्टूडियो अपवादजनक प्रतिभाशाली कलाकारहरूको घर हो जसले अविश्वसनीय इमेजरी वितरित गर्न सहकार्य गरेर कार्य गर्दछन्। उच्चतम गुणवत्ता र नवीन समाधानहरूको उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, आरएसपीसँग अत्यन्त लचिलो, कस्टम पाइपलाइन छ, जसले कम्पनीलाई द्रुत मापन गर्न र दर्शकहरूको दर्शकहरूको बढ्दो मागको लागि आफ्नो वर्कफ्लो समायोजित गर्न अनुमति दिन्छ।
हाम्रो स्टुडियोले एडिलेड, दक्षिण अष्ट्रेलियामा अवस्थित भएको फाइदाको मजा लिन्छ, विश्वको सबैभन्दा जीवित शहरहरू मध्ये एक। त्यो, हाम्रो स्टर्लिंग प्रतिष्ठाको साथ मिलेर, र सबैभन्दा ठूलो र भरपर्दो छूटहरूको एकमा पहुँच, आरएसपीलाई विश्वव्यापी फिल्म निर्माताहरूका लागि चुम्बक बनाउँदछ। यसले हामीलाई निरन्तर सफलतातिर उक्सायो र आरएसपीलाई स्पाइडर म्यान: फार्म फ्रु होम, कप्तान मार्वल, डम्बो, अलिता: ब्याट एन्जेल, द प्रिडेटर, टम्ब रेडर, पिटर रबिट, एनिमल वर्ल्ड, थोर: राग्नारोक, लोगन, पान, एक्स-पुरुष फ्रेंचाइजी र गेम अफ थ्रोन्स।
होलिling संगीत अटलान्टा र्यापर केसी कार्टरबाट "आउँनुहोस्" रिलिज गर्दछ - जुन 26, 2020
एमटीआई फिल्मले CORTEX v5.3 को साथ सेट-देखि-स्क्रिन कार्यप्रवाह व्यवस्थापन द्रुत गर्दछ - जुन 23, 2020
ELIAS कला ELIAS संगीत को रूप मा रिब्रेन्ड्स - जुन 23, 2020
एडोटेट एरोरा स्वास्थ्य अभियान / कोलोरी प्रसारण - सोशल मिडिया प्रसारण - सोशल मिडिया प्रसारण - सामाजिक मेगाडा शिक्षा ग्यामर चापमैनलाई सम्मानित SJGolden - कोलोनी / शिकागो TVU नेटवर्क अल्ट्रा एचडी फोरम दृश्य प्रभाव 2019-08-09
अघिल्लो: पिक्सेलवर्क ट्रूकट प्लेटफर्मले सिनेमाई मोशनलाई "ब्रेभस्ट" लाई दिन्छ
अर्को: हूड र टान्डम एडाप्टर एलईई फिल्टर द्वारा परिचय